Soo dejiso Vimeo bilaash ah - Badbaadi Vimeo fiidiyowyo dhowr ah oo riix
Waxaad isticmaaleysaa nooca duugga ah. Halkan guji si aad u rakibto nooca ugu dambeeyay 4.2.2
Soo dejiso Vimeo Bilaash ah
❝Ku keydi fiidiyowyada Vimeo dhowr dhagood❞
➶ Boggan ayaa kuu oggolaanaya inaad soo dejiso wixii fiidiyoow Vimeo ah adiga oo galaya URL-ga fiidiyowga.
Nuqul ka samee URL-ga fiidiyowga oo ku dheji sanduuqa kor ku xusan, ka dibna Vimeo soo dejiyaha ayaa fiidiyowga ka heli doona isla markiiba. Midigta guji xiriirinta soo dejiso oo ku keydi fiidiyoowga Vimeo disk-ga maxalliga ah.
Fududeeyaha Fudud ee Vimeo
Kordhintaani waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka soo dejiso fiidiyoowga Vimeo adoo ku duro cirbadaha badhanka si toos ah qalabka Vimeo. ➥ Rakibo hadda
Waxay kaa caawineysaa inaad soo dejiso fiidiyoow gaar ah Vimeo oo aad duubto fiidiyowga tooska loo baahiyo. Taageer shabakadaha badankood. ➥ Rakibo hadda
➥ Rakibo hadda
Faa'iidooyinka Qalabkaan Vimeo Video Download Tool
Ka soo dejiso qaddar aan xadidnayn oo fiidiyowyo Vimeo ah Liistooyinka, kanaalada, Likes, Daawashada dambe, Xirmooyinka.
☀ Qalabkayaga lagu soo dejinayo filimada Vimeo wuxuu ka dhigi karaa fiidiyowga mid la qaadan karo, isagoo kuu oggolaanaya inaad ku wareejiso aalado badan adigoon u baahnayn gelitaanka internetka.
☀ Waxay meesha ka saartaa saacadaha aan dhamaadka lahayn ee isqarxinta iyo culayska! Waad soo dagsan kartaa fiidiyowga oo aad u daawan kartaa filimka adiga oo aan wax carqalad ah ku dhicin (waxaa laguu oggol yahay inaad joojiso oo aad xoogaa fudud hesho).
☀ Waad dib uheli kartaa fiidiyowyada, filimada iyo bandhigyada TVga intii aad rabto.
☀ Waqti badan oo dhacdooyinka TV-yada laga daawado ayaa laga tirtiraa server-ka. Haddii aad soo dejiso qaybta ka hor intaysan ka saarin server-ka, wuxuu qayb ka noqonayaa ururintaada.
Vimeo waa goobta ugu wanaagsan ee bilaash looga daawado, la wadaago isla markaana la dhigo fiidiyowyo HD ah. Waxaad ka heli kartaa waxyaabaha adiga daneynaya adiga oo dhex maraya qaybaha iyo kanaalada. Ka dib marka aad hesho xisaabta Vimeo Plus ama Pro, waxaad ku raaxeysan kartaa adeeg ka sii fiican iyo faa iidooyin badan.
Soo dejiso Fiidiyowga Vimeo
Soo dejiso muuqaal sare Vimeo video
Ka dib markaad ka soo dejiso fiidiyowyo Vimeo khadka tooska ah, u ciyaar si aad u hubiso tayada fiidiyowga. Waad u nasan kartaa in vidiyowyada la soo degsaday ay leeyihiin isku tayo oo leh kuwa asalka ah ee internetka.
Ku qor furaha ereyga furaha raadinta, fiidiyowga la xiriira ee Vimeo ayaa soo muuqan doona. Kaydso fiidiyaha aad jeceshahay ee Vimeo inaad ku isticmaasho khadadka tooska ah aaladahaan fudud.
Gabi ahaanba waa nabad iyo xor in la isticmaalo
Adiga lagu waydiin maayo inaad bixiso khidmadda, isqorista ama rakibida barnaamij dheeraad ah. Ma jiro pop, virus majirto, goobta ayaa gabi ahaanba nadiif ah.
Vimeo Downloader wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa Google Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari, Microsoft Edge, UC Browser iyo bog furayaasha kasta. Intaa waxaa dheer, waa mid aad u la jaan qaada nidaamka hawlgalka Mac.
Vimeo waa goob caan ah oo lagu daawado fiidiyowga adduunka oo dhan, oo loogu talagalay dadka hal abuurka leh. Dadku way soo gudbin karaan, wadaagi karaan oo arki karaan fiidiyaha. Hadda, way ka sii sahlan tahay inaad ka soo dejiso fiidiyowyada Vimeo oo aad doorato tayada aad ugu jeceshahay HD iyo SD oo leh soo dejiyaha vimeo! Waxa kale oo aad badbaadin kartaa Vimeo video mp4 ama mp3 file qaab. Kaliya raac talaabooyinkan hoose oo abuuro khariidaddaada khadka tooska ah.
Gali Vimeo fiidiyowga URL oo guji badhanka Download.
In kabadan 70 milyan oo dad ah ayaa doorta inay soo geliyaan fiidiyowyo qeexan oo ku saabsan Vimeo si ay ula wadaagaan adduunka. Haddii aad taageere weyn u tahay Vimeo, Vimeo Video Downloader wuxuu noqon karaa doorashadaada ugu fiican inaad ku soo dejiso aflaanta gaaban iyo filimada tooska ah ee internetka. Soo dejiyahaan cabsida leh wuxuu kuu oggolaanayaa inaad badbaadiso fiidiyow kasta oo ka socda Vimeo illaa MP4 oo tayo sare leh sida 720p, 1080p, 2K, 4K. Go'aanka oo dhan gabi ahaanba wuxuu ku saleysan yahay doorbidistaada. Dabcan, tayada sare ayaa ah doorashada ugu fiican. Waa maxay waxa intaa ka badan, dhammaan adeegyada kala soo dejiyaha soo dejiyahaan 100% waa bilaash. Aan isku dayno!
Halkan Ka hel Su'aalahaaga iyo Jawaabahaaga - Sidee loo soo dejiyaa ama loogu keydiyaa fiidiyoowga Vimeo kombuyuutarkaaga?
+ Waa maxay Vimeo Video Downloader?
Vimeo Video Downloader waa aalad khadka tooska ah looga soo dejiyo fiidiyoowga tooska ah ee vimeo toos kombiyuutarkaaga. Adigoo isticmaalaya soo dejisashada Vimeo fiidiyowga waxaad kala soo bixi kartaa fiidiyow kasta oo vimeo ah oo qaab tayo sare leh MP4 ah. Soo dejiyahayagu wuxuu soo saaraa xiriiriyaha fiidiyowga vimeo ka dibna si toos ah ayaad u soo degsan kartaa fiidiyaha. Way fududahay in la isticmaalo oo gabi ahaanba bilaash ah.
+ Vimeo Video Downloader-ka miyey ku shaqeeyaan mobilada?
Qalabkeenu waa aalad ku saleysan webka oo aan ku xaddidnayn oo keliya miisaska desktop. Dadku way isticmaali karaan biraawsarka ay doorbidaan, nidaam kasta oo hawlgal ah ama aalad kasta si ay u galaan, ay ku jiraan aaladda moobiilka sidoo kale.
+ Xagee bay daawadaan fiidiyowyadaydu markay tagayaan kadib?
Fiidiyowyada iyo filimada lagusoo dhexgaliyay aaladdeena waxay galaan galka waxkasta oo aad uxidhay galkaaga soo dejiskaaga. Waad ugu guuri kartaa galka drive kasta oo aad u aragto inuu ku habboon yahay.
+ Qalabka miyaa keydiyaa nuqul faylka aan soo dejinayo?
Vimeo Downloader kuma haayo nuqul ka mid ah wixii aad soo dejisatay oo ku socota serveryadeeda.
+ Mudo intee leeg ayaan ilaalin karaa waxyaabaha la soo dejiyey?
Mar haddii aad soo dejiso filim ama dhacdo dhacdo aaladdaada, adiga ayaa iska leh inaad xafido. Waad daawan kartaa inta jeer ee aad rabto iyada oo aan wax carqalad ah oo kaa dhex socda ama aadan jabin. Ma jiro xad u leh tirada jeer ee aad daawan karto.
+ Miyay jiri doonaan adware ku jira faylka la soo degsaday?
Hubi inaad jiri doonto fayras ama fayras kujira faylka lasoo degay. Adeegyadeena ayaa ah kuwo amaan ah, oo aan u gudubno xiriir aamin ah oo adeegsadayaashayada.
+ Miyaan la wadaagi karaa filimada kuwa kale?
Haa, taasi waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee ku saabsan Soo-dejiyaha Vimeo si loo soo dejiyo Vimeo fiidiyowga, fiidiyowyada aad soo dejiso waxaa lagu wadaagi karaa aaladaha kale iyo dadka kale.
+ Sidee looga helaa Vimeo fiidiyowga isku xirka Android ama Iphone, Ipad?
Haddii aad isticmaaleyso biraawsar, Taabo oo Ku Daaw fiidiyowga, xulo Nuqul (ama laba jibaar nuqulka sumadda) ee kujira menu-ga. Ama dhagsii oo ku hay barta biraawsarka biraawsarkaaga, qasabada ku xulo Dooro Dhammaan ama astaanteeda, ka dibna taabato Nuqul ama sumadeeda.
Haddii aad isticmaaleyso barnaamijka 'vimeo' app, raadso badhanka Share, dhagsii, Jaangooyo wadaag ah oo la wadaago xiriiriyeyaal, emayl iyo qaababkii hore ayaa tusi doona, ka hel ikhtiyaarka Khariidadda ah ee Ku-Xirmid oo riix taa. Ka dib ku laabo biraawsarka oo ka dhaqaaq halkaa ...
+ Sida loo soo dejiyo Vimeo Vidiyo khadka tooska ah ee mobiilkaaga?
⓵ Furan Vimeo
Kuu bilow biraawsarkaaga mobiilka oo aad gasho websaydhka rasmiga ah ee Vimeo ama ku fur arjiga Vimeo taleefankaaga casriga ah. Fur vimeo fiidiyaha aad doorbideyso oo nuqul cinwaanka URL-ka sifiican u dhig.
⓶ Paste Vimeo fiidiyowga URL
Hadda u gudub websaydhka 'FBION' oo ku dheji cinwaanka cinwaanka Vimeo Video Downloader-keena. Hadda, guji ikhtiyaarka soo dejinta si aad u bilawdo soo dejinta.
⓷ Xulo tayada fiidiyowga
Ka dib marka aad doorato tayada fiidiyowga oo aad taabato badhanka Dejinta, fiidiyowga waxaa lagu soo dejinayaa daqiiqado yar iyadoo kuxiran cabirka faylka aad soo dejineyso.
⓸ Goor dambe ka daawo barnaamijkaaga Android / iOS
Ka soo qaad fiidiyowgaaga Vimeo qaybta soo dejinta mobiladaada oo waxaad ku raaxeysataa Vimeo fiidiyowga la soo degsaday adigoon u baahnayn isku xirnaanta internetka.
Su'aalo la mid ah
Sida loo soo dejiyo fiidiyoowga Vimeo iPhone?
Sidee ayaan telefoonka ugu soo dejiyaa Vimeo fiidyowga?
+ Waa maxay sababta fiidiyowgeygu u muujiyo sida maqal ah? Aaway muuqaalka?
Goordhow, soo dejiso! Weli waa fiidiyow! Laakiin Browser-kaaga internetka ma arki karo taas, sidaa darteed wuxuu u matalaa fiidiyow ahaan maqal ...
Eeg, dhibaatadu waxay tahay in Vimeo mararka qaar ay soo bandhigto fiidiyoowga qaab HEVC ah, oo biraawsarrada intooda badani (oo ay ku jiraan chrom iyo Firefox) aysan ciyaari karin. Xaqiiq ahaan, Safari kaliya ayaa si fiican u ciyaari kara fiidiyahaas.
Sikastaba, xitaa biraawsarkaas kumuu ciyaari karo feylkaan fiidiyow ahaan, fiidiyowgaaga fiidiyowga caadiga ah sida VLC ama KMP wax dhib ah kuma lahan sameynta taas. Qaabka HEVC wuxuu kaydiyaa xoogaa cabirka xogta iyada oo aan la lumin tayada, waxay u egtahay in uu yahay beddel macquul ah oo qaab dhismeedka AVC ah oo si ballaaran hadda loo isticmaalo laakiin waa mustaqbalka.
Marka hadda si fudud igu aamin, soo degso faylka fiidiyowga oo iskuday inaad ku ciyaarto qalabkaaga, si fiican bay u shaqeyn doontaa, waad arki doontaa. Haddii aadan wali i rumaysanaynin, rakibi Safari, socodsiiso isku-xirka vimeo isku mid ah, oo arag sida Safari ee sida wanaagsan ugu ciyaarayo fiidiyowga ay Chrome ama Firefox aysan awoodin. Xaqiiq ahaan, halkan waxaa lagu muujiyey in kaliya Safari, IE iyo Edge ay ciyaari karaan qaab muuqaal HEVC ah.
+ Maxaa dhacaya haddii fiidiyowgu uusan soo dejisaninse halkii uu bilaabayo qulqulka?
Midig riix fiidiyowga oo dooro Badbaadiyaha Fiidiyowga / Xidhiidhka Sida; Mobilada, Taabo oo La Daaro Muuqaalka fiidiyowga, xulo Save Save markii menu soo baxayo.
Haddii aad ku jirtid mid ka mid ah aaladaha Apple jecel sida MacOS, ama IOS oo leh iPhones iyo iPads, si fiican ha u canaananina, waa Apple oo mamnuucaya wax kasta oo caadi ah mp3 iyo fiidiyowga soo degsashada baarayaashu, iyagoo isku dayaya inay iTunes xarunta ku jiraan. oo dhan. Oo waxaad ubaahantahay barnaamijyo khaas ah ama daalacasho oo u oggolaanaya soo dejinta feylasha xitaa ka soo horjeedka rabitaanka Apple.
+ Sideen u soo dejisan karaa fiidiyoowga gaarka loo leeyahay ee Vimeo?
Sida fiidiyowga gaarka loo leeyahay ee 'Vimeo' oo ku saleysan borotokoolka RTMP, Safari kaliya ayaa taageerta soo dejinta fiidiyowga noocan ah. Haddii aad rabto inaad ka soo dejiso fiidiyowyo badan Vimeo, waxaad isticmaali kartaa kaaliyaha soo dejinta.
Su'aalo la mid ah: Ma ka soo guurin karaa fiidiyow gaar ah Vimeo?
+ Sidee bay Vimeo Video Downloader u shaqeysaa?
Waxay ku shaqaysaa helitaanka isku xirka makiinadaheena meel fagaare ah iyada oo aan la soo galin isticmaale kasta, iyo haddii fiidiyowgu uusan u furan karin dadweynaha, lama soo degsan karo. Maaddaama ay aragto in fiidiyowga la heli karo oo la soo degsan karo, waxay soo saartaa tayada ay diyaar u tahay in la soo dejiyo waxayna muujineysaa adeegsadaha ikhtiyaarka uu u dooran karo xalka ay doonayaan in la soo dejiyo.
+ Sida loo soo dejiyo fiidiyowyada Vimeo si aad u daawato khadadka offline?
Miyaad ka daawan kartaa Vimeo fiidiyaha khadka tooska ah?
Haddii soo dejintu ay diyaar u tahay fiidiyowga, waxaad arki doontaa batoon hoosta muuqaalka vidiyoga oo oranaya Soo dejiso. Guji batoonka soo degsan oo fiidiyowgu wuxuu bilaabi doonaa inuu ku soo dejiyo kombuyuutarkaaga oo wuxuu ku raaxeysanayaa fiidiyoowga khadka tooska ah.
+ Vimeo xor ma tahay?
Vimeo waxay bixisaa afar ikhtiyaar oo xubin-ahaansho: Plus, PRO, iyo Business, Premium. Midkoodba wuxuu leeyahay heerar kala duwan oo kaydinta iyo taageero sida aad ka arki karto shaxda hoose. Vimeo waxay bixisaa aasaasiga, xubin ahaanta bilaashka ah, laakiin waxay kugu xaddideysaa 500MB kaydinta ugu badan usbuucii.
+ Sideen uga soo dejisan karaa Vimeo fiidiyowyo?
Nuqul URL-ga fiidiyowga aad rabto inaad soo dejiso, oo ku dheji baarka sare. Kadib guji badhanka Dejinta bidix dhanka midig ee bartaas. Waxay xirmi doontaa dhowr ilbidhiqsiyo, ka dib waxaad yeelan doontaa ikhtiyaar aad ku soo dejiso fiidiyowga FLV (Flash), MP4, ama qaab WebM.
+ Sideen ugu soo dejisan karaa Vimeo vidiyo bilaash ah?
Halkeen ka soo dejisan karaa filimada lacag la’aan?
Fur bogga FBION, gali Vimeo fiidiyowga URL oo guji badhanka Download. Waxaad arki doontaa liiska dhammaan xiriiriyeyaasha la heli karo. Xulo qaabka iyo tayada, oo ku raaxeyso fiidiyowyada khadka tooska ah!
+ Miyaad soo dejisan kartaa Vimeo iyadoo la adeegsanaayo
In kasta oo aadan soo dejisan karin fiidiyowyada Vimeo ee diyaar u ah iibsashada ama kirada qaybta On Demand qaybta ee bogga, waxaad soo degsan kartaa fiidyowyo bilaash ah oo daawashada ah. Khasab kuguma aha akoon si aad u daawatid fiidiyowyada, si kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay koonto Plus ama PRO Vimeo waxaad awood u yeelan kartaa inaad kala soo baxdo faylalka isha markay diyaar noqoto.
+ Sidee ayaan awood ugu siin karaa soo dejinta Vimeo?
Dheeraad ah, Pro, Ganacsi, iyo xubnaha Premium waxay leeyihiin ikhtiyaar ay ku awoodaan fiidiyowyadooda si loo soo dejiyo. Haddii aad leedahay xubin aasaasiga ah oo aad cusboonaysiiso koontadaada, ikhtiyaarka loogu talagalay karti-siinta soo dejimaha ayaa si otomaatig ah loo shidi doonaa.
Helitaanka fiidiyowyada soo degsashada waxay kuxirantahay heerka rukunka ee fiidiyowga Abuuraha. Xubnaha aasaasiga ahi awood uma yeelan karaan in fiidiyowyadooda la soo dejiyo; si kastaba ha noqotee, haddii fiidiyowgu ka kooban yahay Plus, Pro, ama xubin ka tirsan meheradda, waxay leeyihiin ikhtiyaar ay ku beddelayaan xulashada soo dejinta.
+ Waa imisa qiimaha Vimeo?
Xubin ka ahaanta Vimeo Plus, oo waxoogaa yar kaydisa kaydinta aasaasiga ah, waxay ku kici doontaa dadka isticmaala $ 7 / bishii, taas oo runtii aan dhib weyn ku ahayn jeebkaaga. Si kastaba ha noqotee, xubin ka ahaanta PRO waxay xirxirtaa wallop, xitaa iyadoo leh kaydinta badan iyo dib-u-ciyaar buuxa HD, $ 20 / bishii illaa 1TB / sanadkii ama $ 34 / bishii illaa 3TB.
+ Waa imisa Vimeo baahida loo qabo?
Ku soo biir Vimeo PRO kaliya $ 20 / bishii lagu dallaco sannad kasta si aad u bilowdo iibinta. Iskuday inaad khatar la'aan ku jirto muddo 30 maalmood ah. Guriga u qaado 90% dakhliga ka dib kharashyada macaamilku. Dooro kiro, iibsato, ama isdiiwaangaliso, oo u dejiso qiimahaaga.
+ Sidee loo doortaa Vimeo soo dejiyaha fiidiyowga ee Mac?
+ Sideed u keydisaa Vimeo fiidiyowga rugtaada?
Ka dib markii fiidiyowga la soo dejiyo, faylka fiidiyowga ka soo qaado faylka wax soo dejiya ee ku jira kombuyutarkaaga iTunes ama aaladda kale sida Android ama iPhone. Hadda fiidiyowga Vimeo ayaa lagu badbaadin doonaa shaashaddaada moobiilka.
Adeegga tooska ah ee tooska ah ee laga soo dejiyo fiidiyoowga Vimeo bilaash ah.
7 isticmaalaha ayaa ku qiimeeyay
Qalabkan, agabyada fiidiyowga Vimeo ee aan xadidnayn ayaa gacanta ku haya. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad koobi ka sameysatid cinwaanka URL Vimeo ee URL, geli meesha loo qoondeeyay oo guji Soo degso. Kaliya daqiiqad, Soo-dejiyaha Vimeo wuxuu si otomaatig ah u ogaan doonaa fiidiyowga wuxuuna kuu abuuri doonaa xiriiriyeyaal kugu soo dejin doona adiga. Waxaad aragtaa, waa wax aad u fudud in la soo bixi karo Vimeo fiidiyowga.
Boggu wuxuu i siinayaa xalka ugu fiican ee laga soo dejiyo fiidiyoowga Vimeo khadka tooska ah. Si fudud u gal URL fiidiyowga oo guji Soo degso. Kadib, wax walba si hagaagsan ayey u socdaan. Waa wax la yaab leh.
Lataliyaha dhaqaalaha, Fort Walton Beach
Kani waa kii ugu fiicnaa Vimeo Downloader ee aan waligay isticmaali jiray. Xaddid la'aan, Waan badbaadin karaa dhammaan fiidiyaha aan jeclahay kumbuyuutarka. Waad ku mahadsan tahay shaqadaada weyn!
Khabiirka Taageerada Kombiyuutarka, Old Saybrook
Soo degsashada fiidiyowyada waligeed sidan uma fududaan sidii adoo aan iska diiwaangelin meel kasta oo aad ka qaban karto Vimeo fiidiyowga. Waan la yaabay maxaa yeelay fiidiyaha aan ugu jeclahay waxaa la soo dejinayaa daqiiqado yar gudahood.
Maamulaha keydka macluumaadka, Charlotte
Dhowaan waxaan soo degsaday fiidiyoow Vimeo weyn ah waxaana laga soo degsaday daqiiqado gudahood. Runtii aad ayaan ula yaabay xawaarehiisa cajiibka ah. Kani waa kaamil Vimeo Video Downloader ah.
Soo-saare Software, Chattanooga
Vimeo Video Downloader waa qalab fiican oo sameeya waxa ay ku yaboohdo. Tani waa mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee lagu soo dejiyo Vimeo Videos. Waxaan rabaa inaan kula taliyo qalabkan qof walba!
Aad ayaan ugu qanacsanahay Vimeo Video Downloader. Xaqiiqdii, waa gebi ahaanba hal-abuur ah oo ka fiican kuwa hoos u dejiyaha kale ee laga helo internetka.
Khabiir Shabakad, Greenland
Tani gabi ahaanba waa mid aad u fiican! Looma baahna inaad soo dejiso Si fudud u koobi oo nuqul URL oo waxaad heli doontaa fiidiyowyada Vimeo wakhti yar. Iyo qaar ka mid ah goobaha fiidiyowga ee caanka ah ayaa sidoo kale si wanaagsan loo taageeray. Khibrad aad u weyn aniga iyo dhib waligey!
Alaab weyn oo bilaash ah! Waxay noqon kartaa qasab dadka raba inay daawadaan fiidiyowyada tooska ah khadka tooska ah ee socodka ama kaliya fiirinta goor dambe. Waa fududahay in la isticmaalo, aamin ah oo runtii sifiican looga qabtay soo dejinta fiidiyowyada!
U soo dejiso Vimeo fiidiyowyada MP4 ugu tayada wanaagsan 2022